मानिसलाई के कारणले हृदयाघात हुने गर्दछ ? कसरी थाहाँ पाउने हृदयाघात हुदै छ भनेर, डा.ओममूर्तिले दिए मुटु जोगाउने जानकारी - Eall Nepal
मानिसलाई के कारणले हृदयाघात हुने गर्दछ ? कसरी थाहाँ पाउने हृदयाघात हुदै छ भनेर, डा.ओममूर्तिले दिए मुटु जोगाउने जानकारी
मानिसलाई के भएमा ‘होलबडी’ उपचार गरिन्छ ? नेपालका कुन कुन अस्पतालमा यो सुबिधा छ ?
सुन भन्दा महङ्गो बन्दै गएको यार्सागुम्बा के कारणले महङ्गो? मानिसहरुलाई के कामका लागि लाभकारी हुन्छ ? यस्तो छ भित्रि राज